Uru nke Rubber mpempe akwụkwọ
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-eji ike siri ike bụ ngwaahịa mpempe akwụkwọ nwere oke na obosara ya, nke a na-eji rọba mee ka ọ bụrụ ihe bụ isi (nke nwere ike ịnwe akwa, mpempe akwụkwọ na ihe ndị ọzọ na-ewusi ike) yana rụrụ arụ. Gini bu uru nke akwukwo roba na ndu? Ka anyị nye gị ...
Kedu otu ị ga-esi họrọ Yoga Mat nke gị?
Enwere ụdị sọlfọ anọ dị na ahịa mba ụwa: matra rọba (roba eke), flax mat (flax eke + eke roba), TPE (ihe nchekwa gburugburu ebe obibi pụrụ iche), PVC (ihe ụrọ PVC). Enweela akwa dị ọnụ ala dịka NBR (Ding Qing na Cheng Rubber) na E…
Mmepe E Si Nweta Onye Na-ebu Ebu
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, na ọganihu nke teknụzụ na-egwupụta coal, mmepe mmepe nke onye na-ebu belt n'okpuru ala na ụzọ dị anya, ikike dị ukwuu, nnukwu ọchịchọ na nnukwu ọsọ na-apụtawanye ìhè, si otú a na-akwalite mmepe nke ogo ahụ nke ...